Su'aalaha la isweydiiyo | Zigong City Xinhua Warshadaha Co., Ltd.
Shan su'aalood oo ay tahay inaad ogaato ka hor intaadan si dhakhso ah u dooran badeecada ugu habboon
Kahor intaadan dooran badeecadaha carbide -ka sibidhka leh, haddii aad noo sheegto baahiyahaaga shantaan dhinac, farsamayaqaannadeennu waxay si dhakhso leh kugula talin doonaan agabka iyo alaabada kuugu habboon. Tani waxay si weyn kuu badbaadin doontaa waqti iyo kharash. Isla mar ahaantaana, alaabada carbide -ka sibidhka ah iyo aaladaha ayaa sidoo kale gaari doona waxqabadka ugu fiican ee wax -qabadka.
S: Miyaad farsameysaa biraha ama qoryaha? Waa maxay maaddada la warshadeeyay?
J: Shirkadeena waxay leedahay in ka badan 30 nooc oo ah darajooyinka carbide -sibidhka la siibay, darajo kastana waxay leedahay xaaladeeda wax -qabad ee ugu habboon. Ka dib markii aan fahmay shaygaaga wax -ka -qabashada, farsamayaqaannadayadu waxay si sax ah u waafajin karaan agabka kuugu habboon, U oggolow in maaddigu gaaro waxqabadka ugu wanaagsan.
S: Ma u baahan tahay inaad iibsato qalabka carbide tungsten ama qalabka jaridda carbide -ka?
J: Shirkadeena waxay u qaybsan tahay laba qaybood oo wax soo saar ah iyadoo loo eegayo qaabka wax soo saarka, alaabada carbide -ka la siibay iyo qalabka carbide -ka sibidhka ah. Badeecadaha alaabta waxaa ka mid ah ulaha carbide sibidhka ah, taarikada carbide ee sibidhka leh, carbide for caaryada iyo dhinta iyo meelaha bannaan ee carbide sibidhka leh, iwm.
Aaladaha carbide -ku waxay u badan yihiin aaladaha goynta carbide -ka ee loo adeegsado dhinacyo kala duwan. Ka dib markaan caddaynno baahiyaha, waxaan yeelan doonnaa koox xirfadlayaal ah oo ku siineysa adeeg hal-hal ah 24-saac.
S: Miyaad leedahay shuruudo sare oo khaas ah oo ku saabsan saxnaanta ka shaqeynta & dulqaadashada alaabada?
J: Guud ahaan marka laga hadlayo, waxaan u hawlgalnaa si waafaqsan dulqaadyada cabbirka cabirka caalamiga ah, kaas oo buuxin kara shuruudaha macaamiisha badankeeda. Si kastaba ha noqotee, haddii aad leedahay shuruudo gaar ah oo ku saabsan dulqaadyada cabbirka badeecadda, fadlan hore noo sii ogeysii, maxaa yeelay qiimaha badeecadda iyo waqtiga gaarsiinta ayaa kala duwanaan doona.
S: Waa maxay sumadda iyo darajada maaddada carbide -ka ee aad hadda isticmaaleyso?
J: Haddii aad bixin karto astaanta carbide -ka sibidhka leh ee aad hadda isticmaaleyso, macluumaadka ku saabsan guryaha kiimikada, guryaha jireed, farsamayaqaannadayadu si dhakhso leh oo sax ah ayay kuugu habboonaan doonaan agabka kuugu fiican.
S: Degganaanshaha tayada iyo wakhtiga hoggaaminta
J: Shirkadeena waa shirkad carbide sibidh leh oo sibidh leh oo ka soo saarta alaabta ceeriin tungsten carbide ilaa alaabada la dhammeeyay ee warshadeena, sidaa darteed iskuxir kasta oo wax soo saar ah annaga ayaa gacanta ku hayna. Shirkadeena si adag ayey u shaqaysaa iyadoo la raacayo shahaadada nidaamka tayada ISO2000, oo hubin karta xasilloonida tayada badeecad kasta. Badeecadaha caadiga ah waxaa lagu rari karaa 3 maalmood gudahood, iyo alaabada la habeeyay waxaa lagu diri karaa 25 maalmood gudahood.